शेल्फ कर्पोरेशन र एजेड LLC सूचना र सुझावहरू
शेल्फ कर्पोरेशन / एज एज कर्पोरेशन भनेको के हो?
एक "शेल्फ निगम," एक "वृद्ध निगम," वा "बुढेसकालको रूपमा पनि चिनिन्छ शेल्फ कम्पनी"जब एक LLC को संदर्भ दिँदै, उदाहरणका लागि, एक निगम हो जुन पहिले नै गठन भइसकेको छ, तर प्रयोगमा छैन, र नयाँ मालिक द्वारा" खरीद "को लागि तयार छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन मानिसहरूले शेल्फ कर्पोरेसनहरू खरीद गर्दछन्। अर्कोतर्फ, यी "तयार बनाइएको" कर्पोरेसनहरू मध्ये कुनै एकलाई विचार गर्दा बाहिर हेर्नुपर्ने केही चीजहरू छन्।
हाम्रो हेर्न क्लिक गर्नुहोस् वृद्ध कम्पनीहरूको सूची
मैले किन शेल्फ कर्पोरेशनको उपयोग वा अधिग्रहण गर्नुपर्छ?
यो नोट गर्न जिम्मेवार छ कि उमेर मात्र कारक छैन। यो सम्भवत व्यवसाय र ndingण सम्बन्धमा मुख्य कारक होईन, व्यवसाय, क्रेडिट, वा घर जग्गा सम्झौताहरूमा संलग्न। एक स्थापित कम्पनीको रूपमा यसले केहि समय बचत गर्न सक्दछ। त्यो हो, तपाईलाई ब्रान्ड नयाँ निगम स्थापना गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रतिक्षा अवधिमा जानु पर्दैन। प्रायः सम्भावित व्यवसाय संसाधनहरू नयाँ वा अप-स्टार्ट कर्पोरेसनमा संलग्न हुन हिचकिचाउँदछन्। त्यसोभए, अवस्थित कम्पनीको साथ, तपाईं तिनीहरूलाई स्थापित संस्थाको रूपमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन वास्तवमा अस्तित्वमा छ। स्पष्टतः कर्पोरेसन अस्तित्वमा छ अधिक राम्रो। तसर्थ, यो अधिक सम्भावना छ कि तपाईंको व्यापार सम्पर्कहरूले तपाईंको कम्पनीलाई अधिक गम्भीर रूपमा लिन्छ। त्यस्तै रूपमा, यसले तपाईंको व्यवसायलाई व्यापार सम्बन्धहरूमा बढी पहुँच प्रदान गर्न सक्दछ।
स्पष्ट हुनको लागि, विश्वसनीयता बढ्छ, हाम्रो विचारमा, जब तपाईं कम्पनीलाई व्यवसायमा संलग्न हुन प्रयोग गर्नुहुन्छ; केवल कसैले वर्षको शेल्फमा कम्पनी सेट गर्ने संख्या द्वारा मात्र होईन। यी सम्बन्धहरूमा सम्झौताहरू, डन र ब्राडस्ट्रिट-प्रकार रेटिंग प्रणाली, आदि समावेश गर्न सक्दछ, सम्भावित वृद्ध निगमहरूलाई हेर्दा सबै पनि विचार गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, यो सर्वोपरि महत्त्वको छ कि तपाईं यी शल्फ कर्पोरेशनहरू विश्वासिला स्रोतहरूबाट लिनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, हामी सम्भव वा अवस्थित दायित्व संग निराकरण को जटिलता प्रदर्शन गर्न को लागी ठूलो कोठामा जान्छौं।
के एक वृद्ध कम्पनीले तपाईंलाई विश्वसनीयता दिन्छ?
एकचोटि तपाईंले आफ्नो शेल्फ कर्पोरेशन राम्ररी छनौट गर्नुभयो, कम्पनीसँग तत्काल फाईलिंग ईतिहास हुन्छ। के यसले तपाईंको कम्पनी र कर्पोरेट छविको लागि तत्काल विश्वसनीयता दिन्छ? हामी भन्न सक्दैनौं कि त्यो आवश्यक हुन्छ। तर, के हुन्छ यदि तपाइँ त्यस्तो कम्पनी छनौट गर्नुहुन्छ जुन वर्षौंको संख्यासँग मिल्छ जुन तपाइँ वास्तवमा निगमले प्रदर्शन गर्ने व्यवसायको प्रकारमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
स्वाभाविक रूपमा, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि तपाईं तत्काल राज्य सम्झौतामा बिड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। खैर, राज्यहरूसँग सामान्यतया कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम दीर्घायु नियम हुन्छन् जुन उनीहरू आफ्ना करारहरूमा बिड गर्न अनुमति दिन्छन्। हामी ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौं कि तपाईं सजीलो क्रेडिट लाइनहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। हामी तपाईंलाई सानो व्यवसाय प्रशासन वा तपाईंको राज्यमा रहेको बै banks्कबाट loansण प्राप्त गर्ने वचन दिन्छौं। न त हामी यस्तो निष्कर्षमा पुग्दछौं कि सम्भावित लगानीकर्ताहरू “स्थापित” कर्पोरेसनको साथ बढी सजिलै आकर्षित गर्न सक्दछौं। तल रेखा हो, इमानदार हुनुहोस्। अरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईंले हालसालै कम्पनी प्राप्त गर्नुभयो, यदि त्यो हो भने।
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं एउटा कुरा आलोचनात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं बीमा गर्न चाहानुहुन्छ शेल्फ कर्पोरेशनले तपाईंले विचार गरिरहनु भएको कुनै पनि अन्तर्निहित वा सुस्त दायित्वहरू छैन। धेरै जसो भागका लागि तपाईले निगमको ईतिहासलाई हेरेर यसबारे आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई प्रमाणिकरण गर्न चाहानुहुन्छ कि यसको व्यावासायिक गतिविधिको हद बढि कसैले EIN को लागी आवेदन गरे। हुनसक्छ यसले बैंक खाता खोल्यो।
यस नियममा केहि परिमाण अपवादहरू छन्। त्यहाँ कहिलेकाँही राम्रा स्थापना भएका कर्पोरेशनहरू विभिन्न कारणका लागि शेल्ट हुन्छन्। यी स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको कार्यकाल वा अस्तित्वमा समय को मात्रा को कारण धेरै मूल्यवान हुन सक्छ। योग्य निकायहरूले सावधानीपूर्वक दायित्व र एक्सपोजरको लागि यसलाई स्क्रब गर्न सक्दछ। वृद्ध कम्पनीहरूको उच्च माग छ। यसबाहेक, माग र मूल्य बढ्छ तिनीहरू कति लामो समयदेखि स्थापित गरीरहेका छन्।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि तपाइँ यसका मालिकहरूबाट सिधा वृद्ध निगम खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले केहि थोरै लगनशीलता गर्नुपर्दछ। तपाइँ चिन्तित हुनुपर्छ यदि व्यक्ति वा समूह वृद्ध निगम बेच्न कुनै लेनदेनमा संलग्न छ; विशेष गरी यो कि निगम वा यसको शेयरधारकहरूको लागि भविष्य दायित्व केहि प्रकार उत्पादन गर्न सक्दछ। यो जहिले पनि जाँच गर्न सजिलो हुँदैन, र निश्चित रूपमा केही विशेषज्ञ अनुसन्धान आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो अभ्यास दृष्टिकोण सम्मानित प्रदायकहरु (वा पुनर्विक्रेता) बाट वृद्ध वा शेल्फ निगम मात्र प्राप्त गर्न को लागी हो। प्रदायकको यस अखाडामा सफल लेनदेनको ईतिहास हुनुपर्दछ। तपाईं यी प्रदायकहरूमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ खरीददारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न। यो पूर्व अवस्थित debtsण वा दायित्व बिरूद्ध एक व्यावहारिक ग्यारेन्टी हो। थप रूपमा यसले बिक्रीको लागि शेल्फ कर्पोरेशन प्रस्ताव गर्नु अघि उचित उचित परिश्रम गर्नु पर्छ।
प्राय: समय शेल्फ वा वृद्ध निगमहरू अलमल्लमा हुन्छन् खोल निगमहरू, दुबै परिभाषा र अस्तित्वको लागि तिनीहरूको कारण सर्तमा। यो भ्रम अझ गल्ती हुन सक्दैन। खाका निगमहरू पूर्ण रूपमा बिभिन्न निकाय हुन्, दुबै क्षेत्र र गठनमा।
शेल कर्पोरेशन एक समावेशी कम्पनी हो जससँग कुनै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति वा परिचालन संरचना हुँदैन। यो एक अमेरिकी संस्था वा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निगम (IBC) हुन सक्छ। तपाईंसँग व्यक्तिगत लगानी कम्पनी (PIC), फ्रन्ट कम्पनी वा “मेलबक्स” कम्पनी हुन सक्छ। त्यहाँ शेल कर्पोरेसनहरूको अस्तित्वका लागि केहि वैध कारणहरू छन्। उदाहरण को लागी, केहि पेशेवरहरु शेल कर्पोरेशनहरु को सार्वजनिक ट्रेडिंग कम्पनीहरु मा बदलिन्छ। पेशेवरहरूले विस्तृत प्रक्रिया र उपयुक्त सरकारी र नियामक एजेन्सीहरू द्वारा अनुमोदनहरूको माध्यमबाट यस प्रक्रिया गर्दछन्। यी कम्पनीहरू प्राय: अवस्थित व्यवसायको साथ मर्ज हुन्छन्। हामी यसलाई कल गर्छौं जसलाई ए भनिन्छ रिभर्स मर्ज। यो एक तरिका हो जहाँ एक छिटो र प्रभावकारी सार्वजनिक जान सक्दछ।
शेल्फ र वृद्ध निगम लाभहरू
नयाँ पूर्व निगमको गठनको समय र खर्चलाई अग्रगामी गरेर समय बचत गर्दै
सम्झौता बिडिंगमा तत्काल पहुँच सबै केसहरूमा सम्भव नहुन सक्छ। अधिक बिडिंग सम्झौताको लागि तपाइँको कम्पनी एक निश्चित न्यूनतम समयको लागि अस्तित्वमा हुन आवश्यक पर्दछ। निश्चित मामला केस केस आधारमा जाँच गर्नुहोस् र पूर्ण प्रकटीकरण प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो कम्पनी अधिग्रहण गर्नुभयो।
तत्काल कम्पनी अधिग्रहण।
कर्पोरेट फाइलिंग दीर्घायु।
सम्भावित लगानीकर्ता र लगानी पूँजीको लागि बढी आकर्षक हुन सक्छ। स्वाभाविक रूपमा उचित कानूनी फाइलिंग गर्न आवश्यक छ। कम्पनीको उमेर, एक्लो, केवल एक सानो कारक हो।
Orण लिनको लागि छिटो र सजिलो पहुँच हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। फेरी त्यहाँ अन्य कारकहरू छन् जुन अधिक वजन छ जस्तै ब्यापार क्रेडिट रेटिंग र लाभप्रदता।
जे होस्, हामी तपाईंलाई इमान्दारी र पूर्ण खुलासा सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँले वृद्ध कम्पनी प्राप्त गर्नुभएको मितिको रूपमा।
बेफाइदा र गुफाहरू
पूर्व अवस्थित दायित्व क्षमता
सम्भावित पूर्व अवस्थित debtण मुद्दाहरू
पूर्व अवस्थित व्यापार लेनदेन जुन भविष्यको दायित्व हुन सक्छ
वृद्ध शेल्फ निगमहरू प्रयोग गर्न केहि जबरदस्त फाइदाहरू छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिष्ठित कम्पनीको माध्यमबाट संस्था खरीद गर्नु हो जुन लामो समयदेखि प्रतिष्ठा हो। हाम्रो संगठनले पुरानो कम्पनीलाई बिक्रीको लागि प्रस्ताव गर्दछ। जनरल कर्पोरेट सर्विसेज, इंकको संस्थापक, कम्पनी समावेशी ब्रान्डको प्रबन्ध गर्ने कम्पनीले १ 1906 ०1991 मा मूल रूपमा कम्पनी स्थापना गर्‍यो। हाम्रो वर्तमान व्यवस्थापन १ XNUMX XNUMX १ देखि यथावतै रहेको छ। यस पृष्ठमा कल वा नि: शुल्क परामर्श फारम भर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। ।